Jọn 11 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Myanmar Ndebele Nepali Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
Jenesis Ọpụpụ Levitikọs Ọnụ Ọgụgụ Diuterọnọmi Jọshụa Ndị Ikpe Rut 1 Samuel 2 Samuel 1 Ndị Eze 2 Ndị Eze 1 Ihe E Mere 2 Ihe E Mere Ezra Nehemaya Esta Job Abụ Ọma Ilu Ekliziastis Abụ Sọlọmọn Aịzaya Jeremaya Abụ Ákwá Ezikiel Daniel Hosia Joel Emọs Obedaya Jona Maịka Nehọm Habakọk Zefanaya Hagaị Zekaraya Malakaị Matiu Mak Luk Jọn Ọrụ Ndịozi Ndị Rom 1 Ndị Kọrịnt 2 Ndị Kọrịnt Ndị Galeshia Ndị Efesọs Ndị Filipaị Ndị Kọlọsị 1 Ndị Tesalonaịka 2 NdịTesalonaịka 1 Timoti 2 Timoti Taịtọs Faịlimọn Ndị Hibru Jems 1 Pita 2 Pita 1 Jọn 2 Jọn 3 Jọn Jud Mkpughe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
11 E nwere otu nwoke na-arịa ọrịa. Aha ya bụ Lazarọs onye Betani, onye si n’obodo nta ebe Meri na Mata+ nwanne ya nwaanyị si. 2 N’eziokwu, ọ bụ Meri ahụ nke tere Onyenwe anyị mmanụ na-esi ísì ụtọ+ ma jiri ntutu isi ya hichaa ụkwụ ya+ ka nwanne ya nwoke Lazarọs na-arịa ọrịa. 3 Ya mere, ụmụnne ya nwaanyị zigaara Onyenwe anyị ozi, sị: “Onyenwe anyị, lee! onye ahụ ị hụrụ n’anya nke ukwuu+ na-arịa ọrịa.” 4 Ma mgbe Jizọs nụrụ ya, ọ sịrị: “Ihe ga-esi n’ọrịa a pụta abụghị ọnwụ, kama ọ bụ inye Chineke otuto,+ ka e wee site na ya nye Ọkpara Chineke otuto.” 5 Jizọs hụrụ Mata na nwanne ya nwaanyị na Lazarọs n’anya. 6 Otú ọ dị, mgbe ọ nụrụ na ọ na-arịa ọrịa, ọ nọrọ ụbọchị abụọ n’ebe ahụ ọ nọ. 7 Mgbe e mesịrị, ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya, sị: “Ka anyị gaghachi na Judia.” 8 Ndị na-eso ụzọ ya sịrị ya: “Rabaị,+ ọ dịchabeghị anya ndị Judia chọrọ ịtụ gị nkume,+ ị̀ na-agaghachi ebe ahụ?” 9 Jizọs zara, sị: “Ọ́ bụghị awa iri na abụọ ka a na-enwe ìhè n’ụbọchị? Ọ bụrụ na mmadụ na-ejegharị n’oge ìhè dị,+ ọ dịghị akpọ ụkwụ n’ihe ọ bụla, n’ihi na ọ na-ahụ ìhè nke ụwa a. 10 Ma ọ bụrụ na mmadụ na-ejegharị n’abalị,+ ọ na-akpọ ụkwụ n’ihe, n’ihi na ìhè adịghị n’ime ya.” 11 Ihe ndị a ka o kwuru, mgbe o kwusịrị ha, ọ sịrị: “Enyi anyị Lazarọs na-arahụ ụra, ma m na-eje ebe ahụ ịkpọte ya.”+ 12 Ya mere, ndị na-eso ụzọ ya sịrị ya: “Onyenwe anyị, ọ bụrụ na ọ na-arahụ ụra, ahụ́ ga-adị ya mma.” 13 Otú ọ dị, ọ bụ banyere ọnwụ ya ka Jizọs na-ekwu. Ma ha chere na ọ na-ekwu banyere ụra efu. 14 Ya mere, n’oge ahụ, Jizọs gwara ha hoo haa, sị: “Lazarọs anwụwo,+ 15 ana m aṅụrịkwa ọṅụ n’ihi unu na anọghị m n’ebe ahụ, ka unu wee kwere. Ma ka anyị gakwuru ya.” 16 Ya mere, Tọmọs, onye a na-akpọ Ejima, gwara ndị na-eso ụzọ ibe ya, sị: “Ka anyị onwe anyị gaakwa, ka anyị wee soro ya nwụọ.”+ 17 Mgbe Jizọs bịarutere, ọ hụrụ na ọ nọworị ụbọchị anọ n’ili ncheta.+ 18 Betani dị nso na Jeruselem, ihe dị ka maịl abụọ site n’ebe ahụ. 19 Ya mere, ọtụtụ n’ime ndị Juu bịakwutere Mata na Meri ịkasi ha obi+ n’ihi nwanne ha nwoke. 20 Mgbe Mata nụrụ na Jizọs na-abịa, ọ gara zute ya; ma Meri+ nọdụrụ n’ụlọ. 21 Mata wee gwa Jizọs, sị: “Onyenwe anyị, a sị na ị nọ n’ebe a, nwanne m nwoke agaraghị anwụ.+ 22 Ma amaara m ugbu a na ihe niile ị ga-arịọ Chineke,+ Chineke ga-enye gị ha.” 23 Jizọs sịrị ya: “Nwanne gị nwoke ga-ebili.”+ 24 Mata wee sị ya: “Amaara m na ọ ga-ebili n’oge mbilite n’ọnwụ+ n’ụbọchị ikpeazụ.” 25 Jizọs sịrị ya: “Abụ m mbilite n’ọnwụ na ndụ.+ Onye nwere okwukwe n’ebe m nọ, ọ bụrụgodị na ọ nwụọ, ọ ga-adị ndụ ọzọ;+ 26 onye ọ bụla nke dị ndụ ma nwee okwukwe n’ebe m nọ agaghị anwụ ma ọlị.+ Ì kwere nke a?” 27 O wee sị ya: “Ee, Onyenwe anyị; ekwerewo m na ị bụ Kraịst, Ọkpara Chineke, bụ́ Onye ahụ ga-abịa n’ụwa.”+ 28 Mgbe o kwuru nke a, ọ gara kpọọ Meri nwanne ya, takwunyere ya, sị: “Onye Ozizi+ abịala, ọ na-akpọ gị.” 29 Mgbe Meri nụrụ ya, o biliri ọsọ ọsọ wee gawa izute ya. 30 N’eziokwu, Jizọs abatabeghị n’obodo nta ahụ, kama ọ ka nọ n’ebe ahụ Mata zutere ya. 31 Ya mere, mgbe ndị Juu ha na ya nọ n’ụlọ,+ ndị na-akasi ya obi, hụrụ Meri ka o biliri ọsọ ọsọ pụọ, ha sochiri ya, n’ihi na ha chere na ọ na-aga n’ili ncheta+ ịga kwaa ákwá n’ebe ahụ. 32 Mgbe Meri bịarutere n’ebe Jizọs nọ ma hụ ya, ọ dara n’ụkwụ ya, sị ya: “Onyenwe anyị, a sị na ị nọ n’ebe a, nwanne m nwoke agaraghị anwụ.”+ 33 Ya mere, mgbe Jizọs hụrụ ka ọ na-akwa ákwá nakwa ka ndị Juu so ya bịa na-akwa ákwá, ọ sụrụ ude n’ime mmụọ ya, o nyekwara ya nsogbu;+ 34 o wee sị: “Olee ebe unu liri ya?” Ha sịrị ya: “Onyenwe anyị, bịa lee ya.” 35 Anya mmiri gbara Jizọs.+ 36 Ya mere, ndị Juu malitere ịsị: “Lee ka o si hụ ya n’anya nke ukwuu!”+ 37 Ma ụfọdụ n’ime ha sịrị: “Nwoke a nke meghere anya+ onye ìsì ahụ, ó nweghị ike igbochi onye a ịnwụ?” 38 N’ihi ya, mgbe Jizọs sụsịrị ude ọzọ n’ime onwe ya, ọ bịara n’ili ncheta ahụ.+ N’eziokwu, ọ bụ ọgba, e jikwa otu nkume+ dọchie ọnụ ya. 39 Jizọs sịrị: “Kwapụnụ nkume ahụ.”+ Mata, bụ́ nwanne onye ahụ nwụrụ anwụ, sịrị ya: “Onyenwe anyị, ka ọ dị ugbu a, ọ ghaghị ịbụ na o siwela ísì, n’ihi na o meela ụbọchị anọ.” 40 Jizọs sịrị ya: “Ọ̀ kwa m gwara gị na ọ bụrụ na i kwere, ị ga-ahụ ebube Chineke?”+ 41 Ya mere, ha kwapụrụ nkume ahụ. Ma Jizọs leliri anya n’eluigwe+ wee sị: “Nna, ana m ekele gị na ị nụwo olu m.+ 42 N’eziokwu, amaara m na ị na-anụ olu m mgbe niile; ma ekwuru m okwu n’ihi ìgwè mmadụ a+ ndị guzo gburugburu, ka ha wee kwere na ọ bụ gị zitere m.”+ 43 Mgbe o kwuru ihe ndị a, o ji oké olu tie mkpu, sị: “Lazarọs, pụta!”+ 44 Nwoke ahụ nwụrụ anwụ wee buru ákwà e kere ya n’ụkwụ na n’aka pụta,+ e kekwara ya ákwà n’ihu. Jizọs sịrị ha: “Tọpụnụ ya ákwà ma hapụ ya ka ọ laa.” 45 Ya mere, ọtụtụ n’ime ndị Juu ndị bịakwutere Meri, ndị hụkwara ihe o mere, nwere okwukwe n’ebe ọ nọ;+ 46 ma ụfọdụ n’ime ha gakwuuru ndị Farisii wee kọọrọ ha ihe niile Jizọs mere.+ 47 N’ihi ya, ndị isi nchụàjà na ndị Farisii mere ka Sanhedrin+ zukọta, wee malite ịsị: “Gịnị ka anyị ga-eme, n’ihi na nwoke a na-eme ọtụtụ ihe ịrịba ama?+ 48 Ọ bụrụ na anyị ahapụ ya otú a, ha niile ga-enwe okwukwe n’ebe ọ nọ,+ ndị Rom+ ga-abịakwa were ma ụlọ nsọ anyị*+ ma mba anyị.” 49 Ma otu onye n’ime ha, Keyafas, bụ́ nnukwu onye nchụàjà n’afọ ahụ,+ sịrị ha: “Ọ dịghị ihe unu maara ma ọlị, 50 unu echeghịkwa na ọ kaara unu mma ka otu onye nwụchitere mmadụ niile ọnwụ,+ kama a ga-ebibi mba a dum.”+ 51 Otú ọ dị, o kwughị ihe a n’echiche nke onwe ya; kama n’ihi na ọ bụ nnukwu onye nchụàjà n’afọ ahụ, o buru amụma na a kara aka na Jizọs ga-anwụ maka mba ahụ, 52 ọ bụghịkwa naanị maka mba ahụ, kama ka o wee chịkọtakwa ụmụ Chineke ndị gbasasịrị agbasasị+ ka ha bụrụ otu.+ 53 Ya mere, malite n’ụbọchị ahụ gaa n’ihu, ha malitere ịgba izu igbu ya.+ 54 N’ihi ya, Jizọs adịkwaghị ejegharị n’ihu ọha+ n’etiti ndị Juu,+ kama ọ hapụrụ ebe ahụ gaa n’obodo dị nso n’ala ịkpa, banye n’otu obodo a na-akpọ Ifrem.+ Ya na ndị na-eso ụzọ ya wee nọrọ n’ebe ahụ. 55 Ma ememme ngabiga+ ndị Juu na-eru nso, ọtụtụ ndị sikwa n’obodo ahụ gbagoo Jeruselem tupu ememme ngabiga ahụ amalite, ka ha wee mee onwe ha ka ha dị ọcha dị ka iwu kwuru.+ 56 Ya mere, ha nọ na-achọ Jizọs, guzokwa gburugburu ụlọ nsọ na-ajụrịtakwa ibe ha, sị: “Gịnị bụ uche unu? Ọ̀ bụ na ọ gaghị abịa ememme a ma ọlị?” 57 Ma, ndị isi nchụàjà na ndị Farisii nyere iwu na ọ bụrụ na onye ọ bụla amata ebe ọ nọ, ya mee ka ha mara, ka ha wee jide ya.
Otú e si dee ya n’asụsụ Grik bụ “ebe anyị.”